Toyota Mingalar Conversion Vehicle
ခေတ်ကိုက delivery ခေတ် အခုမှာ-အခုရ အမြန်လိုတဲ့ခေတ် ဒီလို ခေတ်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ့် Toyota Mingalar ကနေ ပထမဆုံး ထုတ်လုပ်ရောင်းချလိုက်တဲ့ Toyota Mingalar Conversion Vehicle နဲ့ဆိုရင် လိုအပ်တဲ့ temperature တစ်ခုမှာ လိုအပ်သလောက် တင်ဆောင်ပြီး ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် မောင်းပို့နိုင်မှာပါ... Cool Box ကားတစ်စီးအနေနဲ့ ဘယ်လောက်ဆံ့နိုင်မလဲ? ဘာပစ္စည်းတွေသုံးထားမလဲ? ဈေးနှုန်းကရော ဘယ်လောက်လဲ? Video လေးထဲမှာသာဝင်ကြည့်လိုက်ပါနော်... စိတ်ဝင်စားသူတွေအနေနဲ့ Tel : + 95-017514940-41 Hotline : 09405402233 ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပြီး အမှတ် (၆) ၊ (၂) ရပ်ကွက် ၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း ၊ လှိုင်မြို့နယ်ကိုလည်း သွားရောက် လေ့လာ ကြည်ရှု့ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်လို့ သတင်းကောင်းလေးပေးပါရစေ။
Posted by Redline Media on Wednesday, 16 September 2020
ကျနော် ဒီနေ့ မိတ်ဆက်ပေးမှာကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ကားတစီးပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ လူတင်ဆောင်တဲ့ကားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ပစ္စည်းတင်ဆောင်တဲ့ ကားပါ။ ပစ္စည်းဆိုတဲ့နေရာမှာမှ အစားအသောက်မှာဆိုရင် သား၊ ငါး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ကြက်အူချောင်း၊ ဝက်အူချောင်းတွေ၊ နောက်ပြီး နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေ အစရှိတဲ့ ပုပ်သိုးလွယ်တဲ့ အရာတွေ၊ ဆေးဝါးမှာဆိုရင်လည်း လိုအပ်တဲ့ အပူချိန်တစ်ခုမှာ အမြဲတစေရှိနေဖို့လိုအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းပစ္စယတွေကို တင်ဆောင်ပြီး သွားလိုရာကို လျင်လျင်မြန်မြန် ပေးပို့နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ကားတစီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာပါ။ ဒါကို Toyota Mingalar က CarryBoy လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။
ဒီလိုမိတ်ဆက်ပေးရာမှာ အားလုံးသိချင်နေမယ့်အချက်တွေကို မေးမြန်းပေးဖို့အတွက် Toyota Mingalar က ကို ဇွဲထက်အောင် ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
ပထမဆုံးကျနော်မေးချင်တာက ကားအကြောင်းပေါ့နော်။ ဘယ်လိုကားမျိုးကို အခြေခံပြီး ဒီ CarryBoy ကိုတည်ဆောက်ထားသလဲဗျ?
ကားကတော့ ကျနော်တို့ မြန်မာတွေနဲ့ အရင်းနီးဆုံး Toyota အမှတ်တံဆိပ် Revo Single Cab ဖြစ်ပါတယ်။ ကားရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့ $22,100 ကျသင့်မှာဖြစ်ပါ။ cool box ရဲ့တန်ဖိုးကတော့ $16,000 ကုန်ကျမှာဖြစ်ပြီး Toyota Revo Single Cab+ CoolBox = $38,100 or ၅၃၂ သိန်းဝန်းကျင်ကနေစတင်သွားမှာပါ။
ကားအတွက်ကတော့ဟုတ်ပါပြီ။ ကျနော်တို့ အဓိကအကြောင်းလေးဘက်သွားကြရအောင်။ CarryBoy ရဲ့ CoolBox အကြောင်းလေးပေါ့။​ ပထမဆုံးသိလိုတာ ဘယ်နေရာတွေ ဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေမှာ အသုံးတည့်နိုင်မလဲခင်ဗျ?
ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ ပုပ်သိုးလွယ်တဲ့ စားသုံးကုန်တွေနဲ့ သတ်မှတ်အပူချိန်တခုအတိုင်း ရှိနေဖို့လိုအပ်တဲ့ ဆေးဝါးပစ္စည်းတွေ သယ်ဆောင်ရာမှာ သိပ်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်။ Revo Single Cab ပေါ်တင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် မြို့တွင်းပတ်လည်သွားလာပို့ဆောင်ရာမှာ လွယ်ကူအဆင်ပြေစေသလို ခရီးဝေးတွေဘာတွေသွားဖို့ဆိုရင်လည်း အမြဲအဆင်သင့်ဖြစ်စေမှာပါ။
ဒါဆိုရင် အပူချိန်ဘယ်လောက်ကနေ ဘယ်လောက်အထိ သတ်မှတ်ပြီးထားလို့ရလဲဗျ?
အခု Single Cab ပေါ်တင်ထားတဲ့ CoolBox ဟာ အပူချိတ် -၂၅ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ကနေပြီး +၁၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အတွင်း ကိုယ်နှစ်သက်ရာအပူချိန်တစ်ခုကို ရွေးချယ်သတ်မှတ်ပေးထားလို့ရတယ်။ ဥရောပ အဆင့်အတန်းနဲ့အညီ ထုတ်လုပ်ထားတာမို့လို့ သန့်ရှင်းတယ်။ စိတ်ချရတယ်။
အရွယ်အစားအပေါ်မူတည်ပြီး Cool Box မှာ CBM-cool နဲ့ CBS-cool ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်။ CBM medium size ဖြစ်တဲ့အတွက် ပိုမြင့်တာပေါ့လေ။
Model နှစ်မျိုးစလုံးဟာ အလျား 2,420 မီလီမီတာ နဲ့ အနံ 1,800 မီလီမီတာ အတူတူရှိကြပြီး အမြင့်မှာတော့ CBM က 1,750 mm (၅ ပေခွဲ) အထိရှိပြီး CBS ကတော့ 1,370 mm (၄ ပေ သာသာ) ပဲရှိပါတယ်။ ဒါက အပြင်အတိုင်းအတာပါ။
အတွင်းဘက်မှာတော့ အတိုင်းအတာထက် ဝင်ဆံ့မှုကိုပဲတစ်ခါတည်းပြောလိုက်ပါမယ်။​ CBM model နဲ့ဆိုရင် ၄.၉ ကုဗမီတာ လီတာနဲ့ဆိုရင် လီတာ ၄,၉၀၀ အထိဝင်ဆံ့ပြီး CBS model ကတော့ ၃.၆၇ ကုဗမီတာ လီတာနဲ့ဆိုရင် ၃,၆၇၀ လီတာအထိ ဝင်ဆံ့ပါတယ်။
တံခါးပေါက်တွေကရော၊ ဒီလိုတစ်မျိုးထဲရတာလားဗျ၊ တခြားပုံစံတွေရောမှာလို့ရလား?
Box model က နှစ်မျိုးထဲပေမဲ့ တပ်ဆင်မယ့်တံခါးပေါက်တွေက လိုသလိုရနိုင်တယ်လို့ပဲဆိုရမှာပါ။​ လိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းရရှိနိုင်ပြီး အဖွင့်အပိတ်တွေ၊ ဘောင်တွေက stainless steel တွေနဲ့ဖြစ်တာမို့လို့ အကြမ်းခံဖို့၊ ရေရှည်ခံဖို့တော့ ပူစရာကို ရှိမနေဘူး။
CoolBox wall တွေကထူတယ်နော်။ ဘယ်လို materials တွေသုံးထားလဲ?
Box အသားက FRP sheet , Polyurethane foam လို့ခေါ်တဲ့ PU, Marine plywood နဲ့ နောက်ဆုံး FRP sheet နဲ့ ပြန်ပိတ်ထားတာပါတယ်။ FRP sheet ဆိုတာက Fibre-reinforced plastic ဖြစ်ပြီး ရေရှည်ခံသလို အအေးဓါတ်ကိုလည်း ကြာရှည်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တာမျိုးပါ။ သတင်းကောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ ဒီ FRP sheet တွေက ဂျာမနီနိုင်ငံထုတ်တွေဖြစ်တယ်။
CoolBox ကို အအေးပေးပုံလေး ရှင်းပြပေးပါဦး?
Coolbox ကားတစ်စီးအနေနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကရှင်းတယ်။ Compressor က အင်ဂျင် ခန်းမှာရှိတယ်။ ထိန်းချုပ်ဖို့ control penel က canin ထဲမှာရှိတယ်။​ အအေးပေးတဲ့ condenser က cabin ရဲ့ခေါင်ပေါ်မှာရှိပြီး cooling unit ကတော့ coolbox ရှေ့အပေါ်မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့အတွက်တဲ့အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံရိုးရှင်းပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့လည်း အရမ်းလွယ်စေတယ်။ ဂျပန်ကုမ္ပဏီ Denso က ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လည်း အရည်အသွေး အသုံးခံမှု ဘာမှပြောနေစရာမလိုတော့ပါဘူး။
အဲဒီ Denso cooling system ရဲ့ power consumption ကဘယ်လောက်ရှိမလဲ?
Coolbox က တော်တော်လေးမြင့်တယ်နော်။ ပစ္စည်းတင်ရင် ဘယ်လောက်မြင့်မလဲ။ တစ်စီးလုံးရဲ့ အမြင့်ကရောဘယ်လောက်ရှိမလဲ?
820 မီလီမီတာ ၂ ပေခွဲနီးပါးလောက်ပဲရှိတာမို့လို့ ကုန်ပစ္စည်းအတင်အချအတွက်ဆိုရင် အလောတော်ပါပဲ။ အမြင့်ဆုံးအနေနဲ့ CBM Coolbox နဲ့ဆိုရင်တောင်မှ ကားတစ်စီးလုံးရဲ့အမြင့်ဟာ ၈ ပေကျော်ကျော်လေးပဲရှိတာမို့လို့ ဘယ်လိုနေရာမျိုးကိုမဆို ဝင်နိုင်ထွက်နိင်၊ တင်နိုင်ပို့နိုင်တယ်လို့ ပြောချင်ရင်လည်း ပြောလို့ရပါသေးတယ်။
ဒီ CarryBoy ကို လုပ်ငန်းခွင်မှာ သုံးမယ်ဆိုရင် သတိပြုရမယ့်အချက်လေးတွေရှိလား? ရှင်းပြပေးပါဦး။
Coolbox သုံးတဲ့နေရာမှာ သတိထားစရာကလေးတွေကတော့
၁။ အအေးပေးတော့မယ်ဆိုရင် ကားကိုယ်ထည်အောက်က drain hose ကို ပိတ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့။ why>
၂။ Coolbox တံခါးတွေဖွင့်ပြီးမမောင်းပါနဲ့။
၃။ တံခါးဖွင့်တဲ့နေရာမှာ နှစ်ပေါက်စလုံးကို တပြိုက်နက်ဖွင့်ပါ။ တချပ်ပြီးမှ တချပ်မဖွင့်ပါနဲ့။
၄။ အများဆုံးမဟုတ်သေးပေမဲ့ အကောင်းဆုံးတင်ဆောင်နိုင်နဲ့ပမာဏက ၁ တန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကားရဲ့အလေးချိန်က ၂ တန်ဝန်းကျင်ရှိတယ်။ Revo Single Cab က 2.4-L တာဘို ဒီဇယ်အင်ဂျင်နဲ့။ အမြင့်ဆုံးပါဝါ 147 Hp နဲ့ torque 345/400 Nm အထိထွက်ရှိတာမို့လို့ လမ်းပေါ်မှာ မပြေးမှာကို မပူပါနဲ့။
၅။ Coolbox ထဲမှာ လူပိတ်မိနေတဲ့အခြေအနေမျိုးအတွက် နောက် ညာဘက် အပေါ်ထောင့်မှာ emergency switch ရှိတယ်ဆိုတာကို သတိရပါ။
ဒီ Toyota Revo Single Cab အမျိုးအစားက 2.0 L Turbo Diesel အင်ဂျင်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့ Miximun Output အနေနဲ့ 147hp နဲ့ Miximun Torque ကတော့ 345/400 Nm ကိုထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အခုလို ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာ အစားအသောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဆေးဝါးပဲဖြစ်ဖြစ် တနေရာနေ တနေရာကို သယ်ဆောင်ဖို့၊ ပို့ဆောင်ဖို့ဆိုတာ အရင်တုန်းကအချိန်တွေထက် ပိုပြီးလိုအပ်လို့လာပြီဆိုတာကို ဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်း တန်များများ​ ဝန်များများနဲ့ပို့ဆောင်စရာတွေရှိသလို တစ်တန်လောက်တင်ပြီး လိုချင်တဲ့နေရာကို အမြန်ဆုံးပို့ဆောင်ဖို့တွေကလည်း လိုကို လိုအပ်နေဦးမှာအမှန်ပါပဲ။
ဒီလိုမျိုး အအေးခန်း cool box ပါတဲ့ ကားတစ်စီးကိုလည်း ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာလိုအပ်တယ်။ ပစ္စည်းများများတင်ဆောင်ပြီး ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန်သွားဖို့ဆိုရင်တော့ Toyota Mingalar ရဲ့ CarryBoy လေးတွေသတိရလိုက်ပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ဈေးနှုန်းအရကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း သင့်တင့်ပြီး Toyota ရဲ့ Denso ကိုရမှာမို့လို့ မှာယူလိုတယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် ဖုန်း 95-017514940-41 (သို့) Hotline : 09405402233 ကိုဆက်သွယ်လိုက်ရုံပါပဲ။
ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်ကြည့်ရှုဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် အမှတ် (၆) ၊ (၂) ရပ်ကွက် ၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း ၊ လှိုင်မြို့နယ်ကိုလည်း သွားရောက် လေ့လာ ကြည်ရှု့ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်လို့ သတင်းကောင်းလေးပေးပါရစေ။
ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား ပြည်ပမှ မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခွင့် (သို့) ပြည်တွင်းအရောင်းပြခန်းများမှ မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူခွင့် ပြုသွားမည်
Toyota Aye and Sons Service